Amisom oo soo bandhigtay hub la sheegay in laga qabsaday Al Shabaab(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Amisom oo soo bandhigtay hub la sheegay in laga qabsaday Al Shabaab(Daawo Sawirada)
Taliska Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa Saxaafadda u soo bandhigay saanad hub ah oo sida ay sheegeen ay ku qabsadeen weerarkii Shabaabku ku soo qaadeen xerada Amisom ku leedahay Deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan.
Suxufiyiin laga kaxeeyay Magaalada Muqdisho, ayaa Deegaanka Halgan loogu soo bandhigay hubkaasi iyo weliba meydadka xubno ka tirsan dagaal-yahanadii Shabaabka, ee weerarka ballaaran ku soo qaaday Halgan.
Afhayeenka Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, Korneyl Joe Kibet, ayaa faah faahin ka bixiyay weerarka qorshaysan, ee Xoogaga Shabaabku ku soo qaadeen fariisimaha Ciidanka Militariga Itoobiya ee qaybta ka ah Amisom.
“Galabta waxa aanu joognaa saldhiga Amisom ee Halgan oo ay Al Shabaab soo weerartay maalinimadii Khamiista, waxaan la jiraa taliyayaasha Ciidanka Amisom qaytooda Itoobiya, oo hawlgalkan fuliyay.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Afhayeenka, ayaa yiri “Waxa Shabaabku ku soo wareereen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey, waxaa lagu qarxiye meel u jirta 200 mitir u jirta saldhiga, kuma soo dhaweyn difaacyadeena, waad soo aragteen waxa sida uga dhacay halkan, kuma soo dhawaan saldhiga waa laga hortagay, nasiib wanaag waxa ay soo weerareen meel difaaceeda sareeyo, waana dacaayada in ay qabsadeen saldhigan.”
Korneyl Ayenom Mesfin, Taliyaha Ciidanka Itoobiya ee Gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in Shabaabku uu weerar abaabulan ku soo qaaday Halgan, hase ahaatee ay jab xoogan ugu gaysteen.
“Weerar afar jiho ayay nagu soo qaadeen Al Shabaab, cadowga afarta jiho ee naga soo weeraray waad aragteen waxa khasaaro ee ka soo gaaray. Qiyaastii 400 Shabaab ayaa soo weerartay aad bay isu soo abaabuleen, balse way ku jabeen. Dagaalka wuxuu bilowday waaberigii (05:00Am) subaxnimo, wuxuu dhammaaday 09:00Am, subaxnimo.” Ayuu yiri Taliyaha.
Sii Haayaha Taliyaha Ciidanka Amisom, General Nakibus Lakara, ayaa sheegay dagaalka in lagu dilay 140 ka mid ah dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab, balse maanu sheegin khasaaraha dagaalkan ka soo gaaray askartooda.
Sheekh C/casiis Abuu Muscab, Afhayeenka Ciidamada Ururka Al Shabaab, ayaa waxaa uu dhinaciisa sheegay in dagaalka looga dilay 18 nin, halka ay iyaguna ku dileen 60 askari oo Amisom ah, sida uu yiri.
Wasiirrada Gaashaandhigga iyo Amniga Oo Ka Hadlay Weerarkii Saakay Lagy Qaaday Deeganka Halgan